Google Stadia yatove neinotanga zuva, Mbudzi 19 | Kubva kuLinux
Google Stadia yatove neinotanga zuva, Mbudzi 19
Isaac | | GNU / Linux, Mitambo, Noticias
La Google's Stadia vhidhiyo yemitambo yekushambadzira chikuva yatove neinotanga zuva, uye ichave munaNovember 19. Saka pangosara mwedzi mumwe chete usati wawana kunakidzwa nechishamiso ichi. Kubva panguva iyoyo unogona kunakidzwa nekunyoreswa kweStadia Pro, ndiko kuti, yekutanga imwe ye € 9,99 pamwedzi. Gare gare, iyo Stadia Base ichave ichiwanikwa, yemahara kunyorera kunogumira kune 1080p iyo yaizotanga muna 2020.
La Google Stadia interface Yakave yakavhurwa, uye ichave iri muchimiro che gridhi, senge zvirimo zveNetflix uye mamwe maficha evhavha smart maTV kana Steam. Nenzira iyo iwe unogona kusarudza yako aunofarira mavhidhiyo emitambo kuti utambe ipapo ipapo, zvisinei neyako Hardware uye pasina kuisa chero chinhu munharaunda. Zvese zvinomhanya kubva kuGoogle supercomputer yaunowana pamusoro peInternet nebasa iri uye iro rinoshanda nekutenda kuLinux.
Anenge chero chishandiso chinoenderana neChromecast achakwanisa tamba mazita ese ari pane ako runyorwa pa4K uye 60 FPS. Zvisinei neyakaomarara, sezvandataura, asi kwete chikuva kana. Saka vese vane Chrome OS, GNU / Linux, Android, Windows, macOS uye kunyangwe smart TV vanogona kuishandisa. Uye iwe unogona kuzviita kuburikidza neiri kure kwayo, kana pamwe nezvimwe zvinodzora zvaunazvo, unogona kushandisa kunyange keyboard uye mbeva kana zviri nyore kwauri.
Chaunofanira kuva nacho yakadzikama network kubatana, pamwe nekumhanyisa kumhanyisa anosvika makumi matatu neshanu Mbps, zvikasadaro mutambo haufambe zvakanaka. Kunyangwe ichigona kushandiswa pa35p neMbps 1080. Kune rimwe divi, hakuna zvimwe zvakawanda zvakapihwa. Asi pasina nguva refu uchakwanisa kuzvionera wega. Izvo zvakatsigirwa nemutevedzeri wemutungamiri weinjiniya weStadia, Madj Bakar, ndezvekuti vari kushanda kuti vadzikise latency, iyo diki diki iyo mitambo iinayo uye kuti ichadzikira zvakanyanya mune ramangwana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Mitambo » Google Stadia yatove neinotanga zuva, Mbudzi 19